आज सूर्यग्रहण, ग्रहणको समयमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन ? | Nepal Ghatana
आज सूर्यग्रहण, ग्रहणको समयमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन ?
प्रकाशित : १७ असार २०७६, मंगलवार १०:०५
सन २०१९ को पहिलो सुर्य ग्रहण आज २ जुलाई मा हुँदै छ । सुर्य ग्रहण नेपाली समय अनुसार राती १०:४० बजे शुरु हुनेछ र भोली बिहान ३:३६ बजे तीर अन्त्य हुनेछ । करीब ५ घण्टा लामो ग्रहण मा ज्योतिष मान्यताका अनुसार मानिसले केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा यो समयमा केही काम गर्न वर्जित गर्नुपर्ने ज्योतिष शास्त्रीहरु बताउँछन् ।
सूर्य ग्रहण रातिको समयमा लाग्ने भएका कारण नेपाल र दक्षिण एसियाली राष्ट्रबाट देखिने छैन । प्रशान्त महासागर र दक्षिण अमेरिकाबाट देखिनेछ । यो सूर्यग्रहण सवैभन्दा धेरै समय चार मिनेट ३३ सेकेण्डसम्म रहने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
सुर्य ग्रहण भनेको हो?
सूर्य पृथ्वीको सबैभन्दा निकट रहेको एउटा सामान्य प्रकारको तारा हो।सौर्यमण्डलका सम्पूर्ण ग्रहहरूजस्तै पृथ्वी पनि आफ्नो कक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतिर र सूर्यको वरिपरि पनि परिभ्रमण गरिरहेको हुन्छ यसै क्रममा पृथ्वी र सूर्यबीच चन्द्रमाको छायाँ पर्दा सूर्यग्रहण देखिन्छ। सूर्य र चन्द्रको अवस्था सूर्य चन्द्रमाभन्दा करिब चारसय गुना ठूलो र त्यति नै परिमाणमा टाढा रहेको छ। यसैकारण पनि पृथ्वीबाट हेर्दा सूर्य र चन्द्र लगभग उत्रै देखिन्छ। जब चन्द्रमा, पृथ्वी र सूर्यको बीचमा पर्छ तब, चन्द्रमाले सूर्यलाई छेक्छ। यसबेला पृथ्वीका मानिसले आंशिक वा पूर्णरूपले सूर्यलाई देख्न सक्दैनन्। यस्तो प्रक्रिया सूर्यग्रहणमा विपरीत दिशामा रहेको सूर्यलाई आफ्नो मार्गबाट गइरहेको चन्द्रमाले छेक्ने हुनाले यो ग्रहण छोटो समयको लागि मात्र हुने गर्दछ |